Ciidanka DF oo dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb - Caasimada Online
Home Warar Ciidanka DF oo dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb
Ciidanka DF oo dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidanka milatariga Soomaaliya iyo Al-Shabaab uu ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii ciidamada dowladda ay howlgal ku qaadeen deegaanka Orshe oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la’isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilo dadka deegaanka ah ayaa sidoo kale inoo sheegay in haatan ciidamadu ay dhaq-dhaqaaqyo ka wadaan gudaha deegaanka, isla-markaana ay ka sameysteen fariisimo.
Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana jira cabsi laga muujinayo inay dagaal rogaal celis ah soo qaadaan xoogaga Al-Shabaab.
Weli ma jiro wax hadal ah oo dhinaca Al-Shabaab kaso baxay oo ku aadan howl-galkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Si kastaba muddooyinkii dambe Al-Shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan deegaanada Galmudug oo ay ugu horreyso caasimada maamulkaasi ee Dhuusamareeb.